Kenya oo lagu amaanay doorka ay ku leedahay nabada geeska Africa – The Voice of Northeastern Kenya
Kenya oo lagu amaanay doorka ay ku leedahay nabada geeska Africa
Star FM September 20, 2016
Qaramada Midoobay ayaa dowladda Kenya ku bogaadisay doorka hoggaamineed ee ay ku leedahay dadaalka loogu jiro nabad galyada gobolka bariga Africa ee ay qeybo ka mid ah colaadaha ka aloosanyihiin.
Sidoo kale masuuliyiinta Kenya ayaa lagu amaanay in ay kaalin weyn ka qaateen la tacaalidda dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka qaxootiga ku noqda dagaallada sokeeye ee ka aloosan dalal ku yaalla gobolka geeska Africa.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay oo shalay isniintii magaalada New York kulan kula yeeshay madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa sheegay in wax qabadka Kenya ee arrimahaasi la xiriira uu yahay mid aan la iloobi Karin.
Mr Moon ayaa ku booriyay xukuumadda Nairobi in ay sii amba qaado howshaasi ayna sii xoojiso mowqifkeeda la xiriira sidii xasilooni looga dhalin lahaa dhammaan wadamada ku yaalla bariga Africa oo ay ku jiraan Somalia iyo Suudaanta Koonfureed.
Ruto iyo Ban Ki Moon ayaa kulankii ay shalay yeesheen iskula soo qaaday aragtiyo dhowr ah oo ku saabsan dhinaca ammaanka iyo xaaladda bani’aadanimo ka jirta gobolka geeska Africa.
Madaxweyne ku xigeenka dalka, Mr Ruto ayaa New York u tagay si uu uga qeyb galo shir weynaha madaxda dalalka ku jira qaramada Midoobay, isagoo wakiil ka ah madaxweyne Uhuru Kenyatta.
← Laamaha amaanka ee Isiolo iyo Garissa oo ugaarsanaya dad loo heysto in ay weeraro fuliyeen
Booliska Kenya oo lagu eedeeyay in ay hub geeyeen guriga nin horay uga tirsanaa FBI-da Mareykanka →